Efelenme कसरी लिने? Eflenme के हो? यसको अर्थ के हो? Tdk - कसरी लेख्ने।इन्फो
Efelenme कसरी लिने
Efelenme को शुद्ध हिज्जे
स्नेहको अर्थ के हो?
Efelenme कसरी लिने?
इफ्लामा हिज्जे गाइड
टर्कीमा अनुवाद गर्नुहोस्
तीन र चालीस